Amabhodwe engilazi anezisekelo zokhuni - Imisebenzi yezandla ezogaywa kabusha | Imisebenzi yezandla ivuliwe
U-Alicia tomero | 14/11/2021 17:43 | Kubuyekezwe ku- 22/11/2021 23:27 | Umhlobiso, Yezandla, Imisebenzi yezandla yasekhaya
Lo msebenzi wezandla ungomunye walabo esithanda ukuhlobisa noma yiliphi ikhona lendlu. Ngezikebhe ezimbalwa noma Izimbiza zengilazi singenza okunye izisekelo zokhuni futhi ugcwalise lokho kubukeka kwe-vintage esikuthanda kakhulu. Singakwazi gcwalisa ngamatshe ezinobukhulu obuhlukene nemibala bese wengeza isitshalo semvelo noma sokwenziwa. Futhi unenketho yokusebenzisa ezincane amakhandlela ukunikeza ukuthinta kwezothando.
1 Izinto engizisebenzisele amabhodwe:
2 Isisekelo ngezinti ze-popsicle:
3 Isisekelo esinezinti zokhuni eziyisikwele:
3.3 Isinyathelo sesithathu:
Izinto engizisebenzisele amabhodwe:
Izinti zokhuni zilingisa izinti ze-ayisikhilimu.
Izinti zokhuni eziyisikwele ezingama-0,5 cm ububanzi.
I-silicone eshisayo ngesibhamu sakho noma iglue yokhuni ekhethekile.
Ezinye izikele eziqinile zokusika izinkuni noma into efanayo.
Amatshana ambalwa okugcwalisa izimbiza zamatshe.
Izitshalo zepulasitiki noma zemvelo zokuhlobisa.
Isisekelo ngezinti ze-popsicle:
Sizokwenza isisekelo sezinti zokhuni. Sizothatha izilinganiso zobubanzi bembiza yengilazi ngesimo sembiza yezimbali. Sibeka lezo zilinganiso othini lokhuni futhi sinqume ukulinganisa kwazo. Sizokwenza ukusikeka okungu-32 ukukala ukuze kamuva wenze ama-taco.
Sihlanganisa i-glue noma i-silicone izinti ezine, ukwenza uhlobo lwebhulokhi yokhuni. Kufanele zihambisane kahle futhi zihlangane. Sizohlanganisa amakhona ayo nge-glue, kodwa uyinikeze leso simo esiyisikwele, hhayi isimo esingunxande. Ngakho sizoba nesisekelo sethu sokuqala sokhuni.
Isisekelo esinezinti zokhuni eziyisikwele:
Sikala isisekelo noma ububanzi bembiza emise okwebhodwe. Njengoba izinti ziyi-0,5 cm ububanzi kufanele sishiye umkhawulo, sengeze kulokho esikulinganisile 1 cm ngaphezulu. Sibeka izilinganiso phezu kwenduku futhi sinqume izingcezu ezingu-8. Sizophinde sinqume izinti ezine ze-3 cm.
Sihlanganisa iziphetho zezinti ezine ngeglue. Sizokwenza isikwele esiphelele hhayi unxande. Sizokwenza nangezinye izinti ezine ezinde. Izinti ezine ezincane ezi-3 cm sizowabeka ku-vertex ngayinye ukusebenza njengosekelo phakathi kwezakhiwo ezimbili.
Uma sesijoyine sonke isakhiwo, sizogcwalisa enye yezimbiza ngamatshe ezinosayizi abahlukene futhi sizobeka eyodwa yazo izitshalo ezincane.
Indlela ephelele ye-athikili: Imisebenzi yezandla ivuliwe » Yezandla » Amabhodwe engilazi anezisekelo zokhuni
15 ubuciko obulula futhi obuhle ngoboya